နိုင်ဂျာ - ယူရေနီယံတိုက်ပွဲ။ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် - Afrikhepri Fondation
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 22, 2020
နိုင်ဂျာ - ယူရေနီယမ်တိုက်ပွဲ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
Uအားလုံးရူးသွပ်ဖို့ ဦး ဆောင်သောစွမ်းအင်မှီခိုခြင်းမရှိပါ။ အခါသမယ "Spider-Man စစ်ဆင်ရေး" အတွက်အမည်ပြောင်း "ကမ္ဘာမြေနာရီ" မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ပြင်သစ်, မတ်လ 29 2014 မှာ, နိုင်ဂျာအပါအဝင်ဓာတ်သတ္တုအရင်းအမြစ်များအဟောင်းကျွန်မဟုတ်သလိုလုယက်မဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုဒေသများသို့မဟုတ်ငါတို့ပညာတတ်များနှင့်တစ်နာရီများအတွက်အလင်းအိမ်ငြိမ်းအေးဖို့လုံလောက်တဲ့နောင်တပေးသောခိုးယူမြား၏ဘဝညစ်ညမ်းမှု။ တစ်ခုကတစ်နှစ်လျှင်နာရီသင်တန်းပြုလုပ်မပျော်စရာမဟုတ်သလိုသင်္ကေတလမ်းလျှင် ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။
"ကျနော်တို့ဖျော်ရည်မရှိဘဲယခုအဘယ်သို့ပြုပါသနည်း သင်ဘယ်မှာမိုနိုပိုလီထား? "
ထိုနေ့ရက်အတိအကျကမ္ဘာတဝှမ်း, မောက်မာအမျိုးမျိုးတို့ကို၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏နိုင်ငံများတွင် colonizing အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းပျော်ရွှင်စွာဟာဖယောင်းတိုင်ထဲကမိဘဖြစ်ပြီးသေချာပေါက်ရိုးရှင်းစွာ "ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမှအာရုံစိုက်ကို frozen အပြုံးနှင့်ကျယ်ပြန့်မျက်စိလိုသော ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော။ " စကားမစပ်ဆင်းရဲသားကိုအလငျး၌သူတို့၏အဓမ္မစားသုံးမှု, သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့စေသောတစ်ခုကသောင်းကနင်းခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်နေတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု, သူတို့ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်သူတို့ဆက်ဆက်အတိအကျအတွက်မေ့မအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ် ခြောက်ဆယ်မိနစ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်း 1,3 ဘီလီယံကိုလူတွေကသူတို့ဒီနှစ်မဆိုအခြားညဥ့်ပြုပါအဖြစ်လျှပ်စစ်မီးမရှိဘဲအသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်နေစဉ်။
ဒါဟာတကယ်တော့အများကြီးပိုလေးနက်ခဲ့မိလျှင်, သနားစရာနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်။ အမှန်တကယ်ကအခြားယဉ်ကျေးမှုများ, အခြားယဉ်ကျေးမှုများ, အခြားတန်ဖိုးများကိုဆန့်ကျင်လေ့ရှိသည်အားလုံးမိုက်မဲမှဦးဆောင်နှင့်တစ်ခုစွမ်းအင်မှီခို။
ဥပမာအားဖြင့်, အကြာတွင် AREVA ဖြစ်လာခဲ့သည်ရာ 1972 အတွက်, ဒီရူးသွပ်မှုအလယ်၌ထို့နောက် COGEMA ခေါ်နိုင်ဂျာအတွက် Arlit ယူရေနီယမ်သတ္တုတွင်းဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါပြင်သစ်နိုင်ဂျာ, နေရာတွင် Tuareg ပွညျသူပွညျသားအပေါငျးတို့သမြောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖုံးအုပ်သည်၎င်း၏စက်နှင့် Semi-ကန္တာရဒေသ၌သူ၏အားသာချက်မှ installed င်း၏နည်းပညာတွေအကြောင်း raved ။ SOMAIR နှင့် COMINAK ပြင်သစ်ပြည်နယ်ကြီးမားတဲ့အများစုဖြစ်သည့်: ဥရောပမိတ်ဖက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ် COGEMA, နှစ်ခုသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများကဖန်တီးပေးပါတယ်။ နိုင်ဂျီးရီးယားပြည်နယ်ဆယ်နှစ်သူ့ကိုလွတ်လပ်သောကြီးသိသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မတတ်နိုင်ခဲ့။ ထို့ကြောင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ကခွင့်ပြုခွဲဝေအဖြစ်ကိုရိပ်မိသည်။ ယနေ့နိုင်ဂျာနေဆဲယူရေနီယမ်၏ပြင်သစ်တင်သွင်းမှု၏ထက်ဝက်ခန့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
သို့သျောလညျး, နိုင်ဂျာ၏ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာတစ်လလျှင် 25 ယူရိုဖြစ်ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားထက်ပို 90% လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုအဘယ်သူမျှမရှိသည်။ စစ်ဆင်ရေး၏ 47 နှစ်များတွင်နိုင်ဂျာလူဦးရေရဲ့ကဤယူရေနီယံ Extractive မဆိုအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆွဲထုတ်ဘယ်တော့မှသိရသည်။ အတော်လေးဆန့်ကျင်။ site ကိုတွင် Extractive ကနေရရှိလာတဲ့ရှည်သောအသက်အတွက်ဖုန်မှုန့်ဒါမှမဟုတ် radiotoxic နှင့်ရေဒီယိုသတ္တိကြွရွှံ့နွံအဖြစ်သတ္တုရိုင်းများစုစည်းမှုများအတွက်လိုအပ်သည့်ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်လေတိုက် AREVA အားဖြင့်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားနေကြသည်။ ကြောင်းအလုံအလောက်မဟုတ်ခဲ့လျှင်ကဲ့သို့ငါတို့အစေခံရန်နီးပါးငါးဆယ်နှစ်ကြာ, ကျွန်ုပ်တို့၏ "အမျိုးသားရေးဘဏ္ဍာကို" ဒေသခံနေရာတွင် Tuareg လူဦးရေကအသုံးပြုအနည်းငယ် Non-ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရေစားပွဲကိုအသုံးပြုသည်နှင့် radiates ။
အဘယ်ကြောင့်ဓားစာခံ ယူ. သူတို့ကမိုင်းခြိမ်းခြောက်?
ခေါင်းစဉ်လည်းရှားပါးစစ်မှန်ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို, "နိုင်ဂျာ: ယူရေနီယမ်၏တိုက်ပွဲ" 2012 တှငျမှေးဖှားနှင့်လည်းတစ်နာရီခန့်ကြာပါသည်။ သို့သော်အချိန်အနည်းဆုံးကျနော်တို့အကြောင်းကြားကြသည်နှင့်အချို့သောအချိန်များအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဉာဏ်အလင်း။
SOURCE မှ: http://www.notre-ecole.net/niger-la-bataille-de-luranium/
နိုင်ဂျာ - ယူရေနီယမ်တိုက်ပွဲ - အစိမ်းရောင်သတိပေးချက်
5 €ကနေ 16,49 အသစ်
1 € 35,74 ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 16,49 ကိုဝယ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 22, 2020 8:53 pm တွင်၏အဖြစ်
သစ်ပင်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဘဝ - Peter Wohlleben (အသံ)
လျှို့ဝှက်ချက်၏သော့များ - ဒယ်နီယယ်စဗင်နီ